Rano Tianintine roan-jato (66981-73-5) - Phcoker Chemical
SKU: 66981-73-5 Sokajy: Weight Loss
Ny vidin'ny Tianptine raindy (66981-73-5) video
Rano Tiptin Rano (66981-73-5) Taratasy
Ny poety Tianeptine dia fitsaboana tsy manam-paharoa sy fitsaboana anxiolytika izay mamporisika ny fikarakarana ny serotonine (5-hydroxytryptamine, 5-HT), ary ny 5-hydroxyindoleacetic astrona (5-HIAA) ao amin'ny vatan'ny atidoha.
▪ Manatsara ny soritr'aretin'ny aretina mafy (MDD) ny Tianptine
▪ Manampy sy manalefaka ny tazomoka i Tianeptine
▪ Manatsara ny fihetseham-po ny tianeptine ary manahy ny tebiteby.
▪ Mampitombo ny serotoninan'ny ati-doha ny tianeptine
▪ Mampitombo ny famporisihina, mifantoka amin'ny saina, ary mampihena ny tebiteby.
Ny poety Tianeptine dia tendrena amin'ny dosie 12.5 mg ary mandray intelo isan'andro. Tsy toy ny TCA hafa sy ny seliteran'ny seliteran'ny selotonina (SSRI), ny dosieptinina dia tsy mila mihanitatra tsikelikely ary mihenjana rehefa atsahatra ny fanafody.
Ny voka-dratsin'ny torapasika tianeptine dia mahagaga voafetra. Raha oharina amin'ny TCA hafa sy ny kilasin'ny antidepressants SSRI, ny vovokan'ny tianeptine dia saika tsy misy vokany hafa. Na dia eo aza ny mombamomba azy amin'ny lafiny miadana dia zava-dehibe ny tsy manangona tianeptine amin'ny inhibitors monoamine oxidase na antidepresspressants hafa satria mety ho tandindomin-doza ny kombina. Tsy tokony hifangaro amin'ny fanafohezan-tena koa ny Tianeptine ary tokony hampitsahatra ny 24-48 mialoha ny fidirana amin'ny fitsaboana mitaky fanilikilihana na hipnotika. Ireto misy vitsivitsy amin'ireo vokatra mahazatra kokoa mifandraika amin'ny tianeptine.